सुशान्त केसको ड्र’ग्स मामलापछि पहिलो पटक साराअली खानले मुख खोलिन्………. – Khabaarpati
November 3, 2020 Khabar PatiLeaveaComment on सुशान्त केसको ड्र’ग्स मामलापछि पहिलो पटक साराअली खानले मुख खोलिन्……….
एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री साराअली खानले आफ्नो पुरानै अन्दाजमा मुम्बई एयरपोर्टमा आफ्ना फ्यानहरुसंग कुरा गरेकी छन् । साराले एयरपोर्टमा फ्यानहरुसंग गरेको कुराकानी नै यतिबेला सोशल मिडियामा निकै नै भाईरल बनिरहेको छ । जस्मा सारालाई उनका एक फ्यानले कम्लिमेन्ट दिएका छन् ।
अभिनेत्री साराअली खान बलिउडमा औंलामा गन्न सकिने अभिनेत्री मध्यकी एक हुन् । जस्ले कम समयमा बलिउडमा आफ्नो पहिचान बनाउन सफल भईन् । उनको सादगीका साथै उनलाई धेरैले असाध्यै मन पराउँछन् । पिता सैफअलीकी छोरीभन्दा पनि सारालाई उनको आफ्नै अन्दाजका कारण मानिसहरुले बढी रुचाउँछन् ।
पछिल्लो केही समययता साराअली विभिन्न कारणले चर्चापनि रिहन् । ड्र’ग्स केसमा उनको नाम जोडिएपछि पनि उनको फ्यान फलोइंगमा कुनै कमि आएन । यसैबाट थाहा हुन्छ कि सारालाई उनका फ्यानहरुले कति मन पराउँदा रहेछन् भन्ने कुरा । यतिबेला साराअलीको एउटा भिडियो सोशल मिडियामा निकै नै भाईरल भईरहेको छ । जो मुम्बई एयरपोर्टको हो ।
उक्त भिडियोमा साराअली एयरपोर्टमा हिंडिरहेकी थिईन् । सोही समयमा एक महिला फ्यानले उनलाई कम्पिलीमेन्ट दिईन् । र भनिन्,‘मलाई लाग्छ कि सारा तपाईँ निकै नै मायालु हुनुहुन्छ ।’ ती महिला फ्यानले आफुलाई देखाएको मायाप्रति साराले उनलाई मुस्कुराउँदै धन्यबाद दिईन् । यही भिडियो अहिले सोशल मिडियामा निकै नै भाईरल भईरहेको छ । मानिसहरुले निकै नै रुचाईरहेका पनि छन् । यो भिडियोमा सारा निकै नै साधारण तर अत्ति नै सुन्दर देखिएकी छन् ।
सुशान्त सिंह राजपुतको ड्र’ग्स कनेक्शनमा साराको नाम जोडिएपछि उनी बिल्कुलै गायब नै भएकी थिईन् । तर लामो समयपछि सारा आफ्नौ पुरानै अन्दाजमा एयरपोर्टमा देखिएकी थिईन् । कोरोना संक्रमणका कारण साराले मुखमा सेतो रंगको माक्स लगाएकी थिईन् । ड्र’ग्स केसबाट साराको नाम अलगिएपछि उनी आफ्नो नयाँ प्रोजेक्टको शूटिंगमा ब्यस्त थिईन् ।
सारा चाँडै नै वरुण धवनको साथमा नयाँ फिल्म कुली नम्बर वन मा देखिनेछिन् । साराको नाम ड्र’ग्स कनेक्शनमा जोडिएपछि उनलाई उनका पिता सैफअलीले सहयोग गर्नुको साट्टा करिना र तैमुरको साथमा पटौडी गएर बसेका थिए ।